Oké Osimiri Oké Osimiri 2015
Mgbe ị na-arụ ọrụ banyere oké osimiri na nrọ nke ezumike nke a na-echere ogologo oge, ọkpụkpụ oké osimiri ahụ, nke dị na elu nke ewu ewu na oge 2015, ga-enyere aka ịbịaru nso na ihe ịchọrọ. A sị ka e kwuwe, otu eriri na-acha anụnụ anụnụ, nke na-ebipụta n'ụdị shells, kpakpando, corals na algae ogologo oge enwere mmasị na-achọsi ike maka Olympus fashionable. Ọzọkwa, ndị na-emepụta ha kpebiri ịtinye ihe ha ji eme njem na mmiri.
Ụdị osimiri dịgasị iche iche na-acha uhie uhie 2015
Ụdị nkedo dị otú a gụnyere ọtụtụ ọnụ ọgụgụ dị iche iche nke mmiri. Ọ dị mma ma na mbọ ogologo. N'ebe a, isi ihe bụ ịhọrọ ụcha ruru na nha mma. Ọ dị mkpa ikwu na e kere ya, dabere na ụda anụ ahụ, agba nke ngwa ngwa osimiri na uwe akwa.
Ya mere, isiokwu oké osimiri abụghị nanị otu njikọta nke igwe-acha anụnụ anụnụ na nke ọcha. Nke a na palette nwere ike ịgbakwunye na uhie, ọla edo, acha uhie uhie. Hichaa anya na nchara efere microrakushki, anchor, compass, oké osimiri, dolphins, steering wheel and stof.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ihe dị ọhụrụ, gịnị kpatara ị ga - eji wepụ ụcha menthol ? Ihe dị mkpa nke ejiji ejiji n'ememme eji eme ihe na 2015 ga-enye rhinestones. Ihe kachasị mkpa bụ na ihe ịchọ mma ndị a kwesịrị ịbụ nke atụmatụ ntutu kwesịrị ekwesị.
Iji otu jaket a ma ama nwere ike tinye ya na ngwọta ọhụrụ. Ya mere, a na-ahụ anya nke ọma na-acha anụnụ anụnụ, a na-atụgharịkwa ya na unobtrusive. Enwere ike ime nke ikpeazụ a ma ọ bụ agbacha achacha ma ọ bụ oji ma ọ bụ oji.
Ogologo oge gara aga, ọ bụghị ihe nzuzo na ejiji oge ememme mmiri-azụ nke 2015 bụ ihe a ma ama maka ọdịmma ya a na-enwetụbeghị ụdị mpempe akwụkwọ n'ehihie, nke a ga-egbu ngwa ngwa na ụdị ụgbọ mmiri. N'okwu a, a na-eji ejiji ma ọ bụ ihe mgbakwunye pụrụ iche, bụ nke a ka na-eme iji mepụta nkà nkedo mirror.
Mmetụta nke "ndò" na-ewerekwa ọnọdụ na isiokwu mmiri. N'ebe a, e jikọtara nchikọta nke acha ọcha, ọla edo, acha anụnụ anụnụ na acha anụnụ anụnụ na ájá anwụ na-acha, ebili mmiri na ebili mmiri.
Dịka ọ bụla ọ bụla e mere, ọ dị mkpa icheta ọtụtụ agba agba, ogo nke usoro na ọnọdụ ha na ntu ahụ. Ihe abughi obi uto nke ihe omumu mmiri bu eziokwu na enwere ike iburu ya oru. Isi ihe n'otu oge ahụ bụ ịhọrọ ihe osise unobtrusive na ịhapụ "uzo mkpuchi" mkpuchi.
Kedu agba bụ ejiji maka Afọ Ọhụrụ 2016?
Uwe ejiji eji eme akwa 2016
Egwuregwu Ụlọ Akwụkwọ 2014
Ụmụ nwanyị akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ 2014
Agbamakwụkwọ Agbamakwụkwọ 2015
Sarafans nke 2018 - ejiji ejiji - ụdị mara mma maka ụdị ọ bụla
Ebe obibi na-acha ọcha na oji
Esi na pears maka oyi - usoro nhazi dị mfe iji chebe ya
Karịa iji akpụ akpụ akpụkpọ ụkwụ?
Ọ nwere ike ịbụ nna nna nye ọtụtụ ụmụaka?
18+: ịkwa iko na agbamakwụkwọ foto nnọkọ aghọwo ihe ọhụrụ!
Oge maka ezumike: TOP nke ebe kachasị mma n'ụwa
Eshinanthus - nlekọta ụlọ
Kedu ka mmadụ si ada n'ịhụnanya?
Mgbochi ime ihe na ụmụ
Clostridia na feces nke ụmụ ọhụrụ
Uwe eji edozi ejiji na mkpuchi
Nri "Milk Milk" n'ụlọ
Egbugbere ọnụ Balm
Egwuregwu na-ekpuchi ụmụaka
Afọ Ọhụrụ na India - ọdịnala
Uwe ejiji na ime ụlọ